Ma jiraan wax kasta oo shirka Christian Swedish wanaagsan? | Apg29
Ma jiraan wax kasta oo shirka Christian Swedish wanaagsan?
Haddii aad og tahay a Ciise Swedish wanaagsan xuddun shirka Christian sidaas halkan sheeg! Cudurdaaraan fadlan jawaabtaada!
Waxaan ugu baaqayaa beelaha wanaagsan Christian taas waa la naadiyey faham aasaasi ah Kitaabka Qudduuska ah oo iimaanka, in Ciise yahay Rabbiga iyo si ay u badbaadaan doonaa marka aad isaga u hesho!